လုပ်ကြပါဦး – PoemsCorner
ကျနော် အခုပဲဆရာတော်စီကို ဖုန်းဆက်ပြီးပါပြီး ဆရာတော်ဦးဝိရသူFacebook အကောင်. အဟတ် ခံရခြင်း မဟုတ်ပါ။အလင်းမျက်ဝန်း ၀ဘ်ဆိုဒ်မှ “969 ၀ီရသူနဲ့အဖွဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းက မောင်းထုတ်ခံရပြီ”ဟူးသောကောင်းစဉ်နှင်.မွတ်ကုလားတို.
သဘာဝအတိုင်း ဆရာတော်ကို အပုတ်ချထားသော သတင်းအမှားကို အများသိအောင်
တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်း ဖုန်းအဆက်အသွယ်နဲ.သိခဲ.ရပါ
တယ်။အားလုံးသော သူငယ်ချင်းများ အထင်မမှားကြစေရန်။
\_”အလင်းမျက်ဝန်း ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဦးဝီရသူသတင်း မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖော်ပြ\_”
အလင်းမျက်ဝန်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ပေါ်ပြခဲ့သော \_”969 ၀ီရသူနဲ့အဖွဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းက မောင်းထုတ်ခံရပြီ\_”ဟူသော သတင်းမှာ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သတင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဖြစ်စဉ်ရက်စွဲ အတိကျမထည့်နိုင်ခြင်း။
၂။ ဦးဝီရသူ၏ (၁၇-၇-၂၀၁၃)ရက်နေ့ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဥ့်ကူးမြို့နယ်၊ ခတ်သင်ကျေးရွာ တရားပွဲခရီးစဉ်မှ ဓာတ်ပုံကို ယူသုံးထားခြင်း။
၃။ ဦးဝီရသူသည် ကျောက်ပန်းတောင်းခရီး လုံးဝမရှိခဲ့ခြင်း။
၄။ ( ၁၈-၇-၂၀၁၃)နေ့တွင် ဦးဝီရသူ facebook-မှာ တင်ထားသော ဓာတ်ပုံကိုယူသုံးထားခြင်း။ဦးဝီရသူတင်ထားသော ဓါတ်ပုံမူရင်းလင့်ခ်-
လုပ်ကြံထားသော သတင်း အမှား
“969 ၀ီရသူနဲ့အဖွဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းက မောင်းထုတ်ခံရပြီ”
မန္တလေးမြို့မှ နာမည်ကြီး အကြမ်းဖက်သမား မစိုးရိမ် ၀ီရသူ ခေါင်းဆောင်တဲ့ သင်္ဃန်းဝတ်အချို့အား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာများ စုဝေးနေထိုင်နေကြသည့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ဒေသခံများက ၀ိုင်းဝန်း နှင်ထုတ်လိုက်ကြောင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ၀ီရသူနှင့်အဖွဲ့မှ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အတွင်း သုံးရက်ဆက်တိုက် လှုံ့ဆော်ပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရက်တွင် အရှိန်လွန်ပြီး ဒေသခံများထံမှ သားသတ်လိုင်စင်စီအား အလှူခံမိရာမှ ဒေသခံများနှင့် အချေအတင် အငြင်းပွားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ရှိ 969 အမည်ဖြင့် တည်ထောင်ထားသည့် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ရပ်မိရပ်ဖများက ဦးဆောင်၍ မိမိတို့ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်ခွင့်မပြုတော့ဘဲ ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားကြဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြိမ်းမောင်း၍ နှင်ထုတ်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ အဆုံးအမတစ်ခုအား ဂဏန်းအက္ခရာအဖြစ် အသွင်းပြောင်းသုံးစွဲထားသည့် ၇၈၆ ဂဏန်းအား တုပြိုင်၍ ဖန်တီးထားသည့် 969 အဖွဲ့အနေဖြင့် မွတ်စလင်မ်များသည် အမဲသားကို အဓိကစားသုံးနေသည်ဟု သတ်မှတ်၍ နွားမသတ်ရေးအတွက် မိမိတို့သြဇာသုံး၍ သားသတ်လိုင်စင်စီလျှောက်ထားခွင့်အား အလှူခံလာသည့်အပေါ် ဒေသခံများက ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“သားသတ်လိုင်စင် အလှူခံစရာ မလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒီမှာ အဓိကစားတာ နွားမဟုတ်ဘူးဗျ။ ၀က်စားတာ။ ဆရာတော်နဲ့ နောက်ဆုံး ညှိလို့တော့ ရလိုက်ပါတယ်။ သားသတ်လိုင်စင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မလှူနိုင်ဘူး။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကို တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါ ၀က်သား အချိန်တစ်ဆယ် ပို့လှူပေးမယ်ဆိုပြီး ညှနှိုင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။” ဟု ရပ်ကွက်တွင်း နေသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမြင့်သိန်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုန်းကြီးအချို့သည် မိမိတို့ လိုလာပါက ဘုရားအား လက်ညှိုးထိုးပြလေ့ရှိပြီး၊ မလိုအပ်ပါက ဘုရားဟောတရားများကိုပင် မေ့လျော့ဖျောက်ဖျက်၍ လူသတ်နေကြသည်ဟု ဝေဖန်မှုများ ရှိလာပြီး ယခု သားသတ်လိုင်စင်စီအလှူခံခြင်းအပေါ် ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသန်းထွန်းအောင်၏ ပြောကြားမှုကို ယခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
“ဘယ်နဲ့ဗျာ။ သားသတ်လိုင်စင် ဘုရားလှူဖို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ ဘုရားကို နွားတွေ၊ ဆိတ်တွေ၊ ၀က်တွေလှူပြီးတော့လည်း ဘုရားက စားမှာမှ မဟုတ်တာလို့။ တားချင်ရင် ၀က်တစ်မျိုးတည်း တားပေါ့ဗျာ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့တာ ၀က်ကြောင့်ကိုး။”
ယင်း ၀ီရသူနှင့်အဖွဲ့အား မောင်းထုတ်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ်အပေါ် မစိုးရိမ်တွင် နေထိုင်သည့် ၀ီရသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ဟုတ်မှန်ကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ မိမိကျောင်းသို့ အပါတ်စဉ် ၀က်သားဆယ်ပိဿာ ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ၀ီရသူ၏ ပြောဆိုချက်နှင့်တကွ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း 969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်း၏ လှုပ်ရှားမှုများ အားပျော့လာနေပြီး ယင်းဂိုဏ်း၏ ပေါကြောင်ကြောင် လုပ်ရပ်များကြောင့် မကြာမီပျက်ပြယ်သွားဖွယ်ရှိနေပြီး ၀ီရသူနှင့် အဖွဲ့အား အရူများသဖွယ် လူ့အသိုင်းအ၀န်းမှ အထင်အမြင်သေးကာ ဖယ်ကျဉ်ခြင်း ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
အလင်းမျက်ဝန်း အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။(http://www.teol-mm.info/2013/08/969.html)
» ၀ီရသူ မျက်နှာမဲ့၍ နွားလည်းစီးနေပုံ၊ 969 ရပ်ကွက် ဆိုင်းဘုတ် (ဓာတ်ပုံ – ကျော်နန္ဒကို)
ပုဂံပြည် မှ သူရဲကောင်း
In: ဆောင်းပါး Posted By: liyonardo Date: Aug 18, 2013
မဟာ လုပ် ငန်း စဉ် ကြီး၃ရပ်
အခံရှိမှ သဏ္ဍန် ရှိသည်…။
HAPPY BIRTHY TO MY LITTLE BELL :) (အိုင်လွယ်ပန်)
Leave comment No comment & 370 views